Duqa Muqdisho oo Maxkamadaha Gobolka kala hadlay xal-u-helidda Dikimiintiyada Been abuurka ah – Kismaayo24 News Agency
Duqa Muqdisho oo Maxkamadaha Gobolka kala hadlay xal-u-helidda Dikimiintiyada Been abuurka ah
by admin 1st November 2018 069
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) oo kormeeray xarumaha Maxakamadda Ciidammada Qalabka Sida, Maxkamadaha heer Gobol ee darajada koowaad iyo Racfaanka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay mira dhal noqdeen tallaabooyinka wada jirka ah ee loo qaaday xal-u-helista murannada dhulka.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in hirgelinta xafiisyada adeegyada ee degmooyinka ay u fududeeyeen bulshada in ay si sharciyeysan ula kala wareegeen hantida maguurtada ah, isagoona ka digay dukimiintiyada ku saabsan arrinkan ee ay soo saaraan xafiisyada gaarka loo leeyahay (Nootaayo). Isla markaana caddaaladda la horkeeni doonno cid walba oo lagu helo dukimiinti aan sharci ahayn.
“Waxaan ka hirgelinnay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir xafiisyada bixinta adeegyada bulshada, taas oo aan uga golleenahay in muwaadin kasta uu helo dukumiintiga uu doonayo oo sharciyadeysan, dhawraayana mulkiiyaddiisa iyo xaqa uu leeyahay, taas oo horey ay uga jirtay dhibaato weyn iyo muranno joogta ah.”
Eng.Yarisow ayaa kala hadlay Guddoonka Maxkamadda Ciidammada Qalabka Sida in xal waaro loo helo fara gelinta aan sharciga ahayn ee ciidanka qaar ay ku sameeyaan murannada dhulka iyo muhiimadda ay leedahay in sharciga la hor keeno cid kasta oo ku tagri fasha awoodda dawladnimo.
“Marar badan ayaa waxaa dhacay falal la xiriira askar isugu gacan qaadday dhul iyo hanti ay ahayd in ay si sharciga wafaaqsan dacwadahooda u soo gudbiyaan Maxkamaddaha, taas waa mid aan la qaadan karin oo aan meel uga soo wada jeesan doonno. Sidoo kale waxaa naga go’an dib u soo celinta hantida guud cid kasta oo haysata, maadama ay tahay hanti loogu tala galay u adeegidda bulshada.”
Guddoonka Maxkadda Gobolka Banaadir ayaa ku bogaadiyey Maamulka Gobolka dadaalka ay ku bixinayaa xal-u-helista tabashooyinka iyo murannada la xiriira hantida maguurtada ah iyo sidii loo taabbo gelin lahaa hannaan cadaalad oo ay helaan bulshada Gobolku.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxaa kormeerka ku weheliyey Taliyaha Ciidanka Asluubta S/Guud Bashiir Maxamed Jaamac, iyagoo kormeer ku sameeyey xafiisyada ay ku shaqeeyaan Maxkamaduhu.
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo Si Kulul u Canaantay Maamul Goboleedyada
Muddo lix bilod kadib Is Casilaaddiisii Prof Jawaari oo Maanta ka qeyb Galay Kulanka Baarlamaanka
Qarax sababay Dhimasho iyo Dhaawac oo Saakay ka dhacay Magaalada Muqdisho
Daawo: Maxaad kala socotaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jubbaland oo ku sugan dalka kenya iyo sababta ay halkaasi u joogaan?
Tifaftiraha K24 10th March 2017
Akhriso: Madaxweyne farmaajo oo si rasmi ah u magacaabay agaasimayaasha madaxtooyada iyo la taliyeyaashiisa